इण्डक्शन हीटिंग प्रिन्सिपलको साथ एल्युमिनियम पन्नी सीलर
घर / प्रेरण सिलि Machine मेसिन / प्रेरणाको साथ एल्युमिनियम पन्नी सीलर
श्रेणी: प्रेरण सिलि Machine मेसिन टैग: अल पन्नी सीलर, एल्युमिनियम पन्नी प्रेरण मुहर, एल्युमिनियम पन्नी सीलर, एल्युमिनियम पन्नी सीलर निर्माता, एल्युमिनियम पन्नी सीलर मूल्य, बोतल एल्युमिनियम पन्नी सीलर, बोतल प्रेरण मुहर, एल्युमिनियम पन्नी सिलर किन्नुहोस्, टोपी एल्युमिनियम पन्नी सीलर, प्रेरणा पन्नी सीलर, प्रेरणा पन्नी सीलर मूल्य, प्रेरणा सीलर
प्रेरणाको साथ एल्युमिनियम पन्नी सीलर
"प्रेरणाको साथ एल्युमिनियम पन्नी सीलर" के हो?
प्रेरणाको साथ एल्युमिनियम पन्नी सीलर पीपी, पीई, पीईटी, पीएस, एबीएस, एचडीपीई, एलडीपीई र गिलासका बोतलहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, जसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिद्धान्तको प्रयोग गरेर तत्काल उच्च तातो उत्पादन गर्न एल्युमिनियम पन्नी पग्लन्छ जुन त्यसपछि बोतलहरूको खोल्ने पनी गीला-प्रमाणको लक्ष्यसम्म पुग्छ। , चुहावट प्रूफ, फफूका-प्रुफ र संरक्षण समय विस्तार गर्दै।
भित्री छापको सामान्य प्रकार २ टुक्रा भित्री सील हुन्छ जसले एकपटक प्रेरण सील हटाएपछि क्याप्स भित्र माध्यमिक मोहर छोड्दछ। यो सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ जहाँ चुहावटका सवालहरू एक चासोको विषय हो। अर्को विकल्प एकल टुक्रा भित्री सील हो जहाँ एकपटक प्रेरण मोहर हटाइन्छ, त्यहाँ बन्दरमा कुनै लाइनर बाँकी छैन। तपाईले सिलहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुनसँग पुलट्याब छ वा छ जसमा पेलेबल सिल हुन्छ जुन बोतलमा कुनै अवशेष छोड्दैन। तपाइँ पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि लाइनर बोतल सामग्रीसँग मिल्दो छ।
मोडेल 2500W 1800W 1300W
उत्पादन सामाग्री स्टेनलेस स्टील
व्यास व्याकरण 60-180mm 50-120mm 15-60mm
सिलिंग गति 20-300 बोतल / मिनेट
स्थान्तरण गति 0-12.5m / मिनेट
उचाइ सील 20-280mm 20-180mm
अधिकतम पावर 2500W 1800W 1300W
इनपुट भोल्टेज एकल चरण, २२०V, /० / H० हर्ट्ज
लागू सामाग्री पीपी, पीई, पीईटी, पीएस, एबीएस, एचडीपीई, एलडीपीई र गिलास बोतल, प्लास्टिक बोतल मुख एल्युमिनियम पन्नी फिल्म
आयाम (L * W * H): 1005 * 440 * 390mm 970 * 515 * 475mm
प्रेरण सील के हो?
प्रेरण सील इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रेरण मार्फत थर्मोप्लास्टिकबाट बनेको बोन्डि materials सामग्रीको गैर सम्पर्क तरीका हो जुन सामग्रीलाई तताउन एडी धाराहरू उत्पन्न गर्दछ। प्याकेजि industry उद्योगमा, यो प्रक्रिया हेर्मेटिकली कन्टेनर क्यापलाई सिल गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन तातोबाट पन्नी टुक्रा टुक्रा हुने सिलेबल हुने गरी राखिन्छ। हाम्रो एल्युमिनियम पन्नी प्रेरण सीलर उपकरणको मामलामा, पन्नी टुक्रावाटी एक एल्युमिनियम तताउने प्रेरण लाइनर हो।
यी प्याकेजि machines मेशिनहरू उत्पादक शेल्फ लाइफ विस्तार गर्न, चुहावट रोक्नको लागि र विशेष गरी छेडछाड-स्पष्ट छापहरू उपलब्ध गराउन इन्डक्शन सील मार्फत हर्मेटिकली सिसा गिलास र प्लास्टिक कन्टेनरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। एल्युमिनियम पन्नी प्रेरण सीमर मेशिनहरू विद्युत बंद पावर, ह्यान्डहेल्ड, र विभिन्न बन्द आकारहरू सील गर्न म्यानुअल डिजाइनहरूमा उपलब्ध छन्।
एक एल्युमिनियम हीट प्रेरण लाइनर के हो?
तपाईंले यी चीजहरू बोतल र जार कन्टेनरमा कभर गरेर देख्नुहुने छ जब तपाईं प्याकेज बद्दोजिम उत्पादन खोल्नुहुन्छ जस्तो बदाम बटर वा बोतल औषधीहरू। एक एल्युमिनियम गर्मी प्रेरण लाइनर कन्टेनर खोल्दा एक चाँदी पन्नी हो कि प्रमाणित कि प्याकेज उत्पादन छेडछाड-स्पष्ट छ। तिनीहरूलाई आवश्यक हुन्छ कि एल्युमिनियम पन्नी प्रेरणले उपकरणहरू सील गर्न सक्छन् यी लाइनरहरू ठीकसँग क्यानमा राख्नको लागि।
यसबाहेक, क्याप भित्र एक विशिष्ट एल्युमिनियम त ताप प्रेरणा लाइनर निम्न रणनीतिक रूपमा स्थित र डिजाइन तहहरू बाट बनेको बहु-स्तरित मोहर हो:
एक पल्प कागजपत्र तह
एक मोम तह
एक एल्युमिनियम पन्नी तह
एक बहुलक तह
माथिल्लो तह, जुन पप्पल कागजपत्र तह हो, ढक्कनको भित्री भागको विरुद्ध गुँड गर्दछ र यसमा स्पट-ग्लुइड छ। पम्पु पेपरबोर्ड लेयर तेस्रो लेयरमा बाँध्न प्रयोग गरिएको मोमको एक तह पछि, एल्युमिनियम पन्नी, त्यो त्यो परत हो जुन कन्टेनरको पालना गर्दछ। तलको अन्तिम तह पोलीमर लेयर हो जुन प्लास्टिकको फिल्म जस्तो देखिन्छ।
यी चार तहहरूले एक एयरट्याट मोहर उत्पादन गर्न सफल प्रेरण प्रक्रियाको लागि आवश्यक गतिशीलता प्राप्त गर्न सँगै मिलेर काम गर्दछ।
प्रेरण सिलिंग अनुप्रयोगहरू
HLQ एल्युमिनियम पन्नी प्रेरण सिलि machines मेशिनहरू स्क्रू क्याप्सहरू खाना, पेय पदार्थ, औषधि उत्पादनहरू र अन्य बीचमा विभिन्न बोतल आकारहरू, जस्तै गोल र वर्ग बोतलहरू, प्लास्टिकबाट बनेको छाप गर्न आदर्श हो।
यसबाहेक, तल विभिन्न उद्योग र उत्पादनहरू छन् जुन LPE सीमिंग मेशिनले ह्यान्डल गर्न सक्दछ।
पेय उद्योग वाइन, क्यान्ड बियर, सोडा, पानी, साइडर, जुस, कफी र चिया, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ
खाद्य उद्योग मासु, समुद्री खाना, तरकारीहरू, फलफूलहरू, सॉस, जाम, टूना, सूप, भांग, मह, पोषण पाउडर, सुख्खा खाना (जस्तै नट, अन्नफल, चामल, आदि)
औषधि उद्योग पशु चिकित्सा आपूर्ति, मेडिकल आपूर्ति, पाउडर, गोली, औषधि कच्चा माल
रासायनिक उद्योग खाना पकाउने तेल, लुब तेल, ग्लू, पेन्ट, फार्म रसायन, सफाई तरल, मसी र लाह, आणविक फोहर र रेडियोधर्मी पदार्थ, मोटर वाहन फ्लुइड (पेट्रोल, तेल र डिजेल)
कसरी इन्धन कार्यको साथ एल्युमिनियम पन्नी सीलर
प्रेरण सिलि process प्रक्रिया पहिले नै उत्पादनले भरिएको टोपी-कन्टेनर संयोजनलाई एल्युमिनियम फोइल इन्डक्शन सीमिंग मेशिनमा आपूर्ति गरेर सुरू हुन्छ। यसमा कन्टेनरमा क्याप हुनु भन्दा पहिले नै यसको एक एल्युमिनियम फोइल हीट इन्डक्शन लाइनर घुसाइएको छ।
क्याप-कन्टेनर संयोजन सीमर टाउको मुनि जान्छ, जुन एक ओस्किलेटि elect इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक क्षेत्र उत्सर्जित गर्दैछ, एक चलिरहेको कन्वेयरको माध्यमबाट। बोतल सीमर टाउको मुनि जाने बित्तिकै एल्युमिनियम पन्नी तताउने प्रेरणा लाइनर एडी प्रवाहको कारणले तात्न थाल्छ। मैन तह, जुन प्रेरण लाइनरको दोस्रो लेयर हो, पग्लन्छ र माथिल्लो तहबाट अवशोषित हुन्छ - पल्प पेपरबोर्ड तह।
जब मोम तह पूर्ण रूपमा पग्लन्छ, तेस्रो तह (एल्युमिनियम पन्नी तह) ढक्कनबाट रिलिज हुन्छ। अन्तिम लाइनर तह, पोलीमर लेयर पनि तातो हुन्छ र प्लास्टिकको कन्टेनरको ओठमा पग्लन्छ। एक पटक पोलीमर शीतल भएपछि, पोलीमर र कन्टेनरको बीचमा सिर्जना गरिएको बन्डले हर्मेटिकली सील गरिएको उत्पाद उत्पादन गर्दछ।
सम्पूर्ण सिलि process प्रक्रियाले कन्टेनर भित्रको उत्पादलाई नकरात्मक रूपमा प्रभाव पार्दैन। यद्यपि यो पन्नी बढी गरम हुन सम्भव छ जसले सिलको तहमा क्षति पुर्‍याउँछ जसको परिणामस्वरूप दोषपूर्ण सिल हुन्छ। यसलाई रोक्नको लागि, LPE ले तपाइँको अनुकूलित एल्युमिनियम पन्नी प्रेरण सिमर उपकरणहरू सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया मार्फत स्ट्रीक गुणस्तर निरीक्षण गर्दछ।
निर्माण प्रक्रिया अघि, हामी तपाईंसँग विस्तृत सल्लाहहरू गर्दछौं तपाईंको आवश्यकताहरू राम्रोसँग बुझ्नको लागि। यो एक ग्यारेन्टी सुरक्षित प्याकेजि line लाइन को लागी आवश्यक मेशीन आकार को रूप मा एक विशिष्ट उत्पादन ह्याण्डल गर्न आवश्यक उपयुक्त प्रणाली निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।